ब्रुस ली को चमत्कारिक जीवन र रहस्यमयी मृत्यु बारे जन्नुहोस, आखिर कसरी ३२ बर्षमै मारि ए वा मरे ? हेर्नुहोस मृ,त्युको रहस्य(भिडियोसहित) – Khabar 27 Media
ब्रुस ली को चमत्कारिक जीवन र रहस्यमयी मृत्यु बारे जन्नुहोस, आखिर कसरी ३२ बर्षमै मारि ए वा मरे ? हेर्नुहोस मृ,त्युको रहस्य(भिडियोसहित)
June 1, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on ब्रुस ली को चमत्कारिक जीवन र रहस्यमयी मृत्यु बारे जन्नुहोस, आखिर कसरी ३२ बर्षमै मारि ए वा मरे ? हेर्नुहोस मृ,त्युको रहस्य(भिडियोसहित)
काठमाडौँ – ३२ वर्षकै उमेरमा ब्रुस लीको निधन भएको थियो । तर, छोटो समयमै उनले धेरैको मन जिते । हलिउडमा चिनियाँ मार्सल आर्टस् ‘कुङ फू’ भित्र्याउने श्रेय ब्रुस लीलाई जान्छ । उनी संसारकै उत्कृष्ट मार्सल आर्टिस्टमध्ये एक हुन् ।
हलिउड फिल्ममा मुख्य भूमिका निभाउने पहिलो एसियन–अमेरिकनका रूपमा पनि उनी चर्चित छन् । अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को, चाइनाटाउनस्थित अस्पतालमा १९४० नोभेम्बर २७ मा जन्मिएका ब्रुस लीको स्थायी घर हङकङ हो । उनका बाबु पनि हङकङका चर्चित कलाकार थिए ।
ब्रुस लीको खास नाम ली जुन फ्यान हो । उनी ‘लिटिल ड्र्यागन’ भनेर पनि चिनिन्छन् । यसको कारण, उनी चीनको ड्र्यागन वर्ष, ड्र्यागन दिन र ड्र्यागन घन्टामै जन्मिएका थिए । यस्तो समयमा जन्मिनेहरू सफल हुने विश्वास चिनियाँ समाजमा छ । ब्रुस लीको ख्याती जति चमत्कारिक छ, उत्तिनै रहस्यमयी छ उनको मृ,त्यु ।
मार्सल आर्ट कलाकार एवं हलिउड अभिनेता ब्रुस ली कसरी अल्पायुमै बिते ?ब्रुस लीको मृ,त्यु हुँदा उनकी छोरी शानोन ली चार बर्षकी मात्र थिइन् । आफ्ना पितासँग विताएको क्षणहरुलाई स्मरणिय राख्न उनले एक वृत्तचित्र बनाएकी थिइन् । हेर्नुहोस –
February 10, 2021 Shyam Lama
जन्डिस, पत्थरी र क्यान्सर जस्ता घा`तक राेगका लागि अचुक औषधीकाे काम गर्छ पाकेको मेवाले, यस्ताे छ तरिका (भिडियाे हेर्नुस्)
मिचेललाई श्रीमान संगको यौ, न बा रेमा जब पत्रकारले प्रश्न सोधे, मिशेलले दिइन् यस्तो जवाफ विश्वभर भयो भाइरल (भिडियो हेर्नुस्)
March 30, 2021 March 30, 2021 Shyam Lama